Badbaadinta vs Maalgelinta: Goorta la dooranayo & sida loo Sameeyo
Bogga ugu weyn Badbaadinta vs Maalgelinta: Goorta la dooranayo & sida loo Sameeyo
kaydinta iyo maalgashiga
Waxaa jiray fikrado iyo fikrado badan oo ku saabsan badbaadinta iyo maalgashiga. Mid ka mid ah mabda'a fekerku wuxuu dhigayaa in kaydku uu ninka ka dhigi karo faqri iyo inaadan marnaba badbaadin karin jidkaaga hantida. Halka dugsi kale uu qabo in marka aadan badbaadin ay u badan tahay inaadan weligaa taajir noqon.
Isla mabda'a fekerku wuxuu ku talinayaa in ay wanaagsan tahay in ninku wax badbaadiyo oo dabadeed maalgashado. Si kastaba ha ahaatee, waxaa had iyo jeer jira door dhinac iska dhigaya qayb yar oo ka mid ah dakhligaaga kharashka safarkaaga si aad u noqoto mid taajir ah.
Halkan maqaalkan, waxaan ku eegi doonaa badbaadinta iyo maalgashiga; farqiga u dhexeeya labada, iyo marka ugu wanaagsan in la sameeyo.
Badbaadinta iyo Maalgelinta: maxay ula jeedaan?
Waxa jira farqi u dhexeeya kaydinta iyo maalgelinta: Keydashadu waxay ka dhigan tahay in meel la dhigo lacagta si hadhow loogu isticmaalo meel ammaan ah, sida xisaab bangi. Maalgelinta waxay ka kooban tahay qaadashada khatarta iyo iibsiga hantida, taas oo aragti ahaan, kordhin doonta qiimaha oo ku siin doona lacag ka badan inta aad geliso saacadaha dheeraadka ah.
Marka aad lacag kaydsato, waxa aad doonaysaa in si degdeg ah loo helo, suurto gal isla markiiba. Kaydinta waxa kale oo loo isticmaali karaa yoolalka mustaqbalka fog, sida hubinta inaad lacag haysato markaad u baahato.
Xisaabaadka kaydka ayaa caadi ahaan khatartoodu yar tahay. Kuwa doonaya koontada kaydka ee boqolkiiba wax-soosaarka ugu sarreeya (APY) waa inay raadiyaan meel kale (ilaa inta ay buuxin karaan shuruudaha dheelitirka ugu yar).
Marka la barbar dhigo kaydinta, maalgashigu waxa ay ku lug leedahay in lacag la meel dhigo mustaqbalka, laakiin leh soo celin sare qaadashada khatar badan. Saamiyada, curaarta, miisaaniyada wadaagga ah, iyo ETFs waa maalgashiyada caadiga ah (ETFs). Si aad u iibsato oo aad u iibiso, waxaad u baahan doontaa dallaal ama xisaab dilaal.
Haddii aad rabto inaad lacag maalgashato, waa inaad qorsheysaa inaad haysato ugu yaraan shan sano. Maalgashiyadu waxay noqon karaan kuwo isbedeli kara oo waxaad ku waayi kartaa lacag. Markaa kaliya geli lacag aadan isla markiiba u baahnayn, gaar ahaan hal ama laba sano gudahood.
Akhri: Waa maxay Lacagta caddaynta? Maxay Matalaysaa?
Maalgelinta iyo kaydinta ma isku mid baa?
Badbaadinta iyo maalgelintu waxay leeyihiin kala duwanaansho badan, laakiin labaduba waxay kaa caawinayaan inaad lacag urursato.
"Ugu horreyn, labaduba waxay ku lug leeyihiin kaydinta lacagta mustaqbalka," ayuu yidhi khabiirka dhaqaalaha iyo qoraaga Chris Hogan.
Labaduba waxay isticmaalaan xisaabaad bangi oo khaas ah si ay lacag u badbaadiyaan. Savers waa inay akoon ka furtaan bangi ama ururka daynta sida Citibank. Maalgashadayaashu waa inay akoon ka furtaan dullaal madax-banaan, inkastoo bangiyo badan ay hadda bixiyaan adeegyo dillaalnimo. Dillaaliinta khadka tooska ah sida E-Trade iyo Charles Schwab waa xulashooyin caan ah.
Badbaadinta lacagta waxay muhiim u tahay kaydiyeyaasha iyo maalgashadayaasha labadaba. Ka hor inta aan la gelin lacag aad u badan maalgelinta muddada fog, maalgashadayaasha waa in ay haystaan ​​lacag caddaan ah oo ku filan oo ay ku daboolaan xaaladaha degdegga ah iyo kharashyada kale ee lama filaanka ah.
Maalgelinta, sida uu qabo Hogan, waa "ka tagista lacagta si aad ugu koraan riyadaada iyo mustaqbalkaaga."
Maalgelinta vs Saving
"Dadku waxay u maleynayaan in badbaadinta iyo maalgashiga ay isku mid yihiin," ayuu yiri Dan Keady, CFP, madaxa istiraatijiyadda qorsheynta maaliyadda ee TIAA.
In kasta oo ay isku ek yihiin, kaydinta iyo maalgelintu aad bay u kala duwan yihiin. Taasi waxay ka bilaabataa hantida ku jirta akoon kasta.
Markaad wax kaydsanayso, ka fakar alaabta bangiga sida xisaabaadka kaydka, suuqyada lacagta, iyo CD-yada. Ka fakar kaydka, ETF-yada, curaarta, iyo maalgelinta wadaagga ah markaad maalgelinayso, ayuu yidhi Keady.
Kaydka: Faa'iidooyinka iyo khasaaraha
Waxaa jira sababo badan oo aad ku badbaadsan karto lacagtaada adag ee aad shaqeysatay. Bilawga, inta badan waa habka ugu badbaadsan iyo habka ugu wanaagsan ee looga fogaado in lacag la waayo. Sidoo kale waa sahlan tahay oo degdeg ah in la helo lacagaha marka loo baahdo.
Badbaadintu waxay leedahay faa'iidooyinka soo socda:
Koontada kaydka ayaa horay u sheegaysa inta dulsaarka aad kasban doonto.
Koontada kaydka waxa caymis ku ah ilaa $250,000 oo ay siisay Hay'adda Caymiska Deposit-ka ee Federaalka, markaa xitaa haddii soo-celinta ay hooseeyso, lacag kuma waayi doontid.
Badeecadaha bangigu guud ahaan aad bay dareere u yihiin, taasoo la macno ah in aad si degdeg ah lacagtaada ku heli karto, in kasta oo ka-noqoshada hore ee CD-yada ay keeni karto ganaax.
Khidmadaha ayaa ah kuwa ugu yar. Xisaabaadka kaydka ee bangiyada ceymiska FDIC waxa kaliya oo lumin kara qiimaha sababtoo ah khidmadaha dayactirka ama jebinta Xeerka D (in ka badan lix lacag bixin bishii).
Badbaadinta guud ahaan waa sahlan tahay. Iyada oo aan lahayn kharash hore ama qaloocyo waxbarasho.
Wax badbaadintu waxay leedahay cillado, ay ka mid yihiin:
Waa suurtogal in wax badan lagu kasbado maalgelinta, laakiin lama dammaanad qaadayo.
Soo celinta hoose awgeed, waxaa laga yaabaa inaad lumiso awoodda wax iibsiga maadaama sicir-bararka uu ka cunayo lacagtaada.
Maalgelinta faa'iidooyinka iyo khasaaraha
Badbaadintu way ka ammaan badan tahay maalgashiga, laakiin ma keenayso ururinta hantida ugu badan.
Maalgelinta: Faa'iidooyinka iyo khasaaraha
Maalgelinta lacagtaada waxay leedahay faa'iidooyin badan, oo ay ku jiraan:
Saamiyada, tusaale ahaan, waxay soo saari karaan soo celin aad uga sarreeya marka loo eego xisaabaadka kaydka iyo CD-yada. Tusmada saamiyada S&P 500 ayaa taariikh ahaan soo laabtay ilaa 10% sanadkii, in kasta oo soo celinta ay aad u kala duwanaan karto sanadba sanadka ka dambeeya.
Dakhliga alaabadu guud ahaan waa sarreeyaa. Maalin kasta oo shaqo ah, saamiyada saamiyada, curaarta, iyo ETF-yada si fudud ayaa loogu beddeli karaa lacag caddaan ah.
Iyada oo la adeegsanayo faylal kala duwan, waxaad si fudud uga gudbi kartaa sicir-bararka oo aad kordhin kartaa awooddaada wax iibsiga. Hadda, kaydka federaalka bartilmaameedkiisu waa 2%. Haddii soo noqoshadaadu ka yar tahay sicir-bararka, waxaad waayi doontaa awoodda wax iibsiga.
Iyadoo soo celin sare ay suurtagal tahay, maalgashigu wuxuu leeyahay faa'iidooyin badan, oo ay ku jiraan:
Soo celinta lama dammaanad qaadayo, waxaana laga yaabaa in qiimaha hantidaadu isbedbedesho, taasoo kuu horseedaysa inaad lumiso lacag.
Waxay kuxirantahay markaad iibiso iyo xaalada dhaqaalaha, waxaa laga yaabaa inaadan dib u helin lacagtaada.
Ku hay lacagtaada akoon maalgashi ugu yaraan shan sano si ay kaaga caawiso inaad la kulanto wax kasta oo hoos u dhac ku yimaada muddada gaaban. Sida caadiga ah, waa inaadan taaban maalgelintaada ilaa inta suurtogalka ah.
Ilaa aad haysato wakhti iyo xirfad aad ku barato naftaada mooyaane, maalgashigu waa hannaan adag oo u baahan caawimo khabiir ah.
Kharashyada dallaalka ayaa noqon kara mid sare. Ka ganacsiga saamiyada ama sanduuqa waxa laga yaabaa inay ku kacdo lacag, inkasta oo dilaaliinta badani hadda bixiyaan ganacsiyo bilaash ah. Waxaana laga yaabaa inaad u baahato inaad bixiso maamulaha lacagta.
Haddaba, badbaadinta ama maalgelinta, keebaa fiican?
Midna si toos ah ugama roona kan kale; Go'aanka badbaadinta ama maalgelinta waxay ku xiran tahay xaaladdaada dhaqaale ee hadda.
Guud ahaan, waa inaad raacdaa laba xeer oo suulka ah:
Qorshaha kaydinta ayaa sida caadiga ah ugu fiican baahiyaha muddada-gaaban ama sanduuqa xaaladaha degdegga ah iyo inta badan, sidoo kale, tan waxaa lagu sameeyaa akoon kayd.
Haddii aadan u baahnayn lacagta shan sano ama ka badan oo aad awoodid inaad wax ka dhimato raasumaalka, waa inaad maalgelisaa.
Tusaale ahaan, waxbarashada kulliyadda ilmahaaga waa in lagu kaydiyaa akoon kayd, akoon suuqa lacagta.
Sanad si aad guri u iibsato? Waxaa laga yaabaa inaad maalgeliso suuqa saamiyada, ayuu yiri Keady. "Taasi waa khamaar ka badan badbaadinta wakhtigaas."
Haddii aad ilaalinayso sanduuqa xaaladaha degdegga ah, waa inaadan waligaa maalgelin ee aad kaydsato.
Markaa haddii aad bukooto ama aad waydo shaqadaada, uma baahnid inaad dib ugu noqoto deynta. Tani waa si aad u hesho lacag meel gaar ah loo qoondeeyay si aad u noqoto mid u dhexeeya adiga iyo nolosha.
Sidoo kale Akhri: Dib u eegisyada Caymiska Xayawaanka Figo 2022: ma sharci baa mise waa khiyaamo?
Goorma ayay tahay inaad maalgeliso?
Maalgelinta ayaa u fiican lacagta muddada-dheer ee aad rabto inaad si degdeg ah u koraan. Maalgelinta suuqa saamiyada, lacagaha la kala beddelo, ama maalgelinta wadaagga ah waxay noqon kartaa ikhtiyaar ku xiran dulqaadkaaga khatarta ah.
Waxaad haysataa wakhti dheeraad ah oo aad ku fuuli karto kor u kaca iyo hoos u dhaca suuqa ee lama huraanka ah marka aad lacagtaada ku haysan karto maalgashi dheer. Maalgashigu waa mid ku haboon marka aad haysato waqti dheer oo horizon ah (sida ugu fiican sanado) oo aanad u baahnayn lacagta dhawaan.
"Haddii aad hadda bilaabayso maalgelinta, waxaan aad ugu talinayaa maalgelinta wadaagga ah ee kobaca," Hogan ayaa ku taliya. Si aad si dhab ah u fahanto waxa socda iyo sida lacagtu u kori karto.
Tilmaamaha bilowga ah ee maalgashiga ayaa diyaar ah. Talaabada ugu horeysa waa inaad wax badan ka barato maalgashiga iyo sababta ay kugu habboon tahay.
Halkan waxaa ah soo koobid degdeg ah si ay kaaga caawiso inaad samayso doorashadaada: u kaydi waxa geesta ku yaal oo maalgashi mustaqbalka.
Bankrate – Badbaadinta vs. maalgashiga: Halkan waxaa ah kala duwanaanshaha ugu muhiimsan ee maareynta lacagtaada
Investopedia-badbaadinta vs. Maalgelinta: waa maxay faraqa u dhexeeya?
Caawiye Lacag-Waa maxay faraqa u dhexeeya kaydinta iyo maalgelinta lacagtayda?
Khiyaanooyinkii ugu dambeeyay ee Venmo Sanadkii 2022: Sida Looga Badbaado Hackers -ka
Dib -u -eegista Gamingjobsonline.Com 2022: Ma u Qalmaa | Sharci Ama Fadeexad
Dib u eegista Megatypers 2022: Ma Sharcibaa Mise Khayaano Lacag Kale?
Dib -u -eegista Xeerka Lacagta ee Ecom 2022: Sharci ama Shaqo kale oo ka timid Fadeexadda Guriga
10 Aaladaha Streaming Music ugu Fiican Sanadka 2022 | Faallooyinka ugu Fiican
Sida loo iibsado saamiyada Amazon sanadka 2022 | Tilmaan-Talaabo Tallaabo-fudud ah oo Fudud
Tan iyo markii uu dillaacay masiibada, suuqa saamiyada ayaa si aad ah u burburay taas oo keentay in shirkado badan ay wadaagaan…
Dib -u -eegista Moneydance 2022: Legit, Fadeexad, Qiimaynta, Faa'iidooyinka & Qasaarooyinka
Moneydance waa barnaamij maaliyadeed shaqsi oo awood leh oo loogu talagalay Mac, Windows, Linux, iPhone, iyo iPad. Waxay ahayd mid…
Sidee Loo Maal Galiyaa Lithium | Tilmaame-yare Tallaabo-tallaabo ah
Lithium -ku wuxuu noqonayaa mid sii kordhaya oo ah isha maalgashiga. Gaar ahaan marka baytariyada Lithium-ion ay wax walba ka awoodaan unugyada…
Haddi ujeedadaadu tahay inaad lacag badan samayso oo aad hanti hesho, inaad yeelato hanti ma guurto ah oo kobcaysa...
15ka Kayd ee ugu Sarreeya ee Bixiya Qeybinta Billaha ah & ETFs sanadka 2022
Ma ahan warar sheegaya in dulsaarka dulsaarku uu yaraado oo bangiyo badani aysan soo celin wax kayd ah…